Fri, Jul 10, 2020 at 5:18pm
काठमाडाैं, ८ साउन । लभस्टोरी फिल्म ‘लभ यु हमेशा’को टिजर रिलीज भएको छ । टीजरसँगै नयाँ रिलीज मिति पनि तोकिएको छ । भदौ ६ मा रिलिज भनिएको यो चलचित्र अब भने भदौ २७ मा रिलीज हुने बताईएको छ । फिल्मको प्राबिधिक कार्यमा केही समय लाग्ने भएकाले फिल्म तीन साता पर सरेको निर्माण पक्षले बताएको छ । युवन गुरुङको प्रस्तुतिमा मिलन गुरुङ सहनिर्माता..
काठमाडाैं, ६ साउन । ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’ इतिहासमै सबैभन्दा बढी कमाउने चलचित्रकाे सूचीकाे पहिलाे स्थान ओगट्न सफल भएकाे छ । चलचित्र ‘अवतार’लाई उछिन्दै ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’ इतिहासमै सबैभन्दा बढी कमाउने चलचित्र बनेको हाे। सन् २००९ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘अवतार’ले २.७८९ अर्ब अमेरिकी डलर कमाएको थियो। अवतारलाई दश वर्षसम्म कुनै चलचित्रले जित्न सकेको थिएन। तर सन् २०१९ यस वर्षको अप्रिल २२ मा रिलिज भएको ‘एभेन्जर्सः इन्डगेम’ले भने ‘अवतार’लाई..
​साम्राज्ञीको चाहना 'ग्ल्यामर लुक्स' की 'भल्गर रुप' ?
काठमाडौँ, ४ साउन फिल्म ड्रिम्स बाट फिल्मी यात्रा सुरु गरेकी नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहका केही तस्विरले सामाजीक सञ्जाल तताइरहेको छ । नेपालबाट विभिन्न कामको लागी वा घुम्नकै लागी विदेश गए पनि नेपाली नायिकाहरुको विकिनी तस्विर सार्वजनिक हुनु नौलो कुरा होइन । तर साम्राज्ञीको भने अलि फरक तस्विर सार्वजनिक भएका छन् । फिल्म मारुनीको प्रर्दशनको तयारी गरिरहेको बेला उनको यस्तो तस्विर सार्वजनिक भएको..
काठमाडौँ, २ साउन । प्रायः हरेक शुक्रबार राजधानीसहित देशभरका फिल्म हलमा नेपाली तथा विदेशी चलचित्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने नौलो विषय होइन तर यो शुक्रबारदेखि देशभरका हलमा एकमात्र नेपाली चलचित्र ‘एक्लो घर’ प्रदर्शनीमा आउने भएको छ । घर फिल्म देशका करीब १०० हलमा एक्लो प्रदर्शनी हुने वितरक करण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । एकै दिन धेरै फिल्मको प्रतिस्पर्धा हुँदा निर्माता, वितरक तथा कलाकारलाई समेत..
सुपर ३० : बिहारका गणेश जसले ऋतिकलाई डेढ वर्षसम्म एक, दू, तीन, चार, पाँच, छौ भन्न सिकाए !
भागलपुर, बिहार , २ साउन । भारतको बिहारमा गरीब बच्चालाई निःशुल्क आईआईटी प्रवेश परीक्षाको तयारीकक्षा चलाएका आनन्द कुमार मा बनेको बलिउड चलचित्र सुपर ३० अहिले रिलिज भैसकेको छ । उक्त फिल्ममा आनन्दको भूमिका निर्वाह गरेका लिड एक्टर ऋतिक रोशनको अहिले निकै प्रशंशा छ । रोशनले निर्वाह गरेको विहारी शिक्षकको भूमिका तथा त्यहाँ उनले प्रयोग गरेको बिहारी लवजको समेत चर्चा भैरहेको छ ।..
मुम्बइ, ३१ असार । बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिने भएकाछन्।भारतीय फिल्म ‘साहू’ मा यो जोडीको काम हेर्न दर्शकहरु व्यग्र रहेको बताईन्छ । हिन्दी, तेलुगु र तामिल भाषामा निर्माण गरिरहेको यो फिल्मको बारेमा सानो खबर बाहिरिएसँगै यसको बारेमा ह्वात्तै चर्चा बढेको छ । प्रभासको फिल्म भनेर यसअघि नै चर्चा बटुलेको यो फिल्ममा छायाँकार आर माधीले उक्त..
शिल्पालाई झापड हान्नुको यस्तो थियो छबीको रहस्य, यसरी खुल्यो पोल !
असार २६, काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले श्रीमान छबी ओझाबाटै असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीमा हिजो बुधबार उजुरी दिइन । चलचित्र निर्माता छबी ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीच पछिल्लो समय खटपट भएको सुनिदै आएको थियो । तर शिल्पाको कानको जालि फुट्नुमा अर्को छुट्टै रहस्य छ । स्रोतका अनुसार उनिहरुबिच एक समान्य बिषयमा झगडा भएको थियो । सानो कुरामा खटपटहुँदै गर्दा छबीलाई चित्त..
शिल्पाले दिइन छविराज ओझा विरूद्ध घरेलु हिंसाको उजुरी, मागिन डिभोर्स !
असार २५, काठमाडौँ । निर्माता छविराज ओझा विरूद्ध पत्नी तथा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले घरेलु हिंसाको उजुरी दिएकी छन्। शिल्पाले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा घरेलु हिंसा गरेको उजुरी दिएकी हुन्। उजुरी परेपछि छलफलका लागि उनीहरू दुबैलाई आज बुधबार दिउँसो परिसर बोलाएको प्रहरीले जनाएको छ। अभिनेत्री रेखा थापासँग डिभोर्स गरेपछि निर्माता ओझाले अभिनेत्री पोखरेलसँग करिब २०७३ सालको दशैंमा सुटुक्क विवाह गरेका थिए। विवाह गरे पनि उनीहरूले सो..
असार २४, काठमाडौं । म यस्तो गीत गाउँछु २’मा पूजा र पल भूमिकामा रहने भएका छन् । सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’मा पूजा शर्मा र पल शाह पक्का भएका हुन । २ वर्ष अगाडि नै चलचित्रको निर्माण घोषणा गरिएको यो चलचित्र त्यति त्यही समय नै चलचित्रका लागि पूजा र पल मूख्य भूमिकामा रहने भनिएको थियो..
काठमाडौँ, २३ असार चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो १९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा असार २७ गते ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घसाधना सम्मान’ समारोह आयोजना गर्ने भएको छ । दुई वर्षपछि हुन लागेको उक्त कार्यक्रम यसपटक राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा गरिने भएको छ । पुरस्कार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान गरिने बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यसपटक ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’बाट ३१ जना तथा ‘दीर्घसाधना सम्मान’बाट..
काठमाडौँ, २३ असार निर्देशकसमेत रहेकी अभिनेत्री दीपाश्री निरौला अभिनेता आर्यन सिग्देलसँग आइटम गीतमा देखिएकी छिन् । भदौ ६ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेसँगै चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’को निर्माण यूनिट यसको प्रचारमा लागेको छ । सुरुवातमा यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति साउन ३० गतेलाई तोकिएको थियो । तर, यो मितिमा ३ वटा नयाँ हिन्दी चलचित्र रिलिज हुने भएपछि निर्माणपक्ष एकसाता पछि सरेको हो । यसैविच,..
कंगना रानाउतको फिल्म धाकडको पोस्टर सार्वजनिक, हातमा देखियो स्नाइपर गन, करण जोहरसँग टक्कर ?
मुम्बई, एजेन्सीहरु २१ असार । चर्चित बलिउड नायिका कंगना रानाउत पछिल्लो समयमा लगातार आफ्नो सिनेमाका लागि ब्यस्त रहन थालेकी छिन् । बुधवार उनको फिल्म जजमेन्टल है क्या को ट्रेलर रिलीज गरिएलगत्तै शनिबार फेरि उनको आगामी फिल्म धाकडको फष्र्ट लुक जारी भएको छ । पोस्टरमा कंगना आफ्नो दुवै हातमा स्पाइनर गन समातेर देखिएकी छिन् । जसमा उनको लुक हेर्दा फिल्म जबरजस्त एक्शनले भरिपूर्ण छ..
काठमाडौँ, २० असार साउन ३० मा रिलिज हुन लागेको बलिउड चलचित्र ‘साहो’को प्रभावका कारण ‘हजार जुनी सम्म’लाई एक साता पछि सारिएको छ । विकासराज आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, प्रियंका कार्की लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । यो चलचित्र भदौ ६ मा सरेसँगै अब बक्स अफिसमा चलचित्र ‘जाइरा’सँग भिडन्त हुने भएको छ । ‘जाइरा’को यूनिटले लामो समयदेखि भदौ..
काठमाडौँ, १९ असार हाँस्य चलचित्र चलिरहेको समयमा अहिले हाँस्य कलाकारहरु चलचित्र बनाउन जोडतोडका साथ लागिरहेका छन् । दर्शकको साथ पाउने अपेक्षा उनीहरुको छ । यही क्रममा, हाँस्य जोडी सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले चलचित्र बनाउने भनेको पनि एक बर्ष भैसकेको छ । तर, यो जोडीले अझै चलचित्रको घोषणा गर्न सकेको छैन । यसैविच, यो जोडीले बनाउन लागेको चलचित्रमा निर्देशक रामबाबु गुरुङ भित्रिएको खबर..
'आइफा'को कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा 'चिसो'
काठमाडौँ, १८ असार इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी आइफा अवार्ड आयोजनाबाट सरकार पछि हटेपछि भारतीय पक्षले विकसित घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । कलाका माध्यमले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउन भारत सरकारले समेत चासो लिएको अवार्ड आयोजनालाई विवादमा तानेर पछि हट्नुले कुटनीतिक समस्या आउन सक्ने भएको हो । आइफा अगावर्ड आयोजनाको अनुमति मन्त्रिपरिषदबाट दिइसकेको सरकारले दरिलो अडान नलिएको र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले..
‘दबंग ३’ का लागि सलमान खानले घटाए ताैल, यस्ताे छ उनकाे नयाँ लुक्स
मुम्बई, १८ असार । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान एक पटक फेरी चुलबुल पाण्डेका रूपमा देखिने भएका छन्। फिल्म ‘दबंग ३’ मार्फत सलमान फेरि एकपटक चुलबुल पाण्डेकाे भूमीकामा आउने भएका हुन्। यो फिल्म सलमानको खानका प्रतीक्षित फिल्ममध्ये एक हो । फिल्ममा सलमान खानको भूत कालको समयलाई पनि देखाइनेछ । जसमा उनलाई फरक लूकमा देख्न सकिनेछ । भारतीय मिडियाका अनुसार उक्त लूक्समा आफूलाई ढाल्नका लागि सलमान..
काठमाडाैं, १६ असार । छाेटाे समयमै क्रिकेट जगतमा चर्चत बनेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अब गायक पनि बनेका छन् । भर्खरै उनकाे 'मेमरी' अर्थात सम्झना बाेलकाे गीत सार्वजनिक भएकाे छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त भिडियाे सार्वजनिक भएकाे बताएका हुन्। उनले फेसबुक स्टाटसमार्फत मन पराउने विस्वास व्यक्त गरेका छन्। गायनमा याे उनकाे पहिलाे पटक भने हाेइन । यस भन्दा अघि उनले..
यी हुन् रिलिज हुन नसकेका शाहिद कपूरका ७ फिल्म
मुम्बई, १६ असार । बलिउडका सुपरस्टार शाहिद कपूर 'चकलेटी हिराे' का नामले परिचित छन्। लामाे समयदेखि बक्स अफिसमा हिट चलचित्रकाे खाेजिमा रहेका शाहिदकाे पछिल्लाे चलचित्र कवीर सिंह प्रदर्शनमा छ। गत शुक्रबारदेखि भारतिय बक्स अफिसमा रिलिज भएकाे उक्त चलचित्रले राम्राे व्यापार गरेकाे छ। फिल्म ‘कबीर सिंह’ लाई दर्शकले खुबै मन पराइरहेका छन् । फिल्मले अहिलेसम्म १६७ करोड कलेक्सन गरिसकेको छ । फिल्मको कहानी र अभिनयलाई..
मुम्बई, असार १६ 'दंगल गर्ल' नामबाट परिचित जायरा वसीमले आइतबार बिहान सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम मार्फत सिनेमाबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेकी छन्। उनले लेखेको पोस्टबाट उनले धार्मिक कारणले सिनेमा छाडेको स्पष्ट हुन्छ। '५ वर्ष अगाडि मैले गरेको निर्णयले मेरो जीन्दगी बदलिदियो। मैले बलिउडमा पाइला राखे। यो यात्रा थकाउने किसिमको थियो। यी पाँच वर्षमा म मेरो अन्तरआत्मासँग लडिरहें। छोटो जीन्दगीमा यति लामो लडाईं लडिरहन सक्दिन।..
पूर्वघोषित रिलिज मितिबाट १ साता पर सर्‍यो शिल्पा र आयुष्मानको प्रेमकथा 'सानो मन'
काठमाडौँ, १२ असार असार २० मा रिलिज हुने भनिएको सिनेमा ‘सानो मन’ १ साता पर सरेको छ । अब असार २७ गते रिलिज हुने भएको छ। अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्के स्टारर ‘सानो मन’ को प्राविधिक काम नसकिएपछि रिलिज मिति १ साता पर सारिएको निर्माणपक्षले जनाएको छ। सुयोग गुरुङको डेब्यू निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमामा सक्षम सुवेदी, गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल,..
भारतीय फिल्म उद्योगको 'बादशाह' भनिएका शाहरुख खान 'फ्लप माथि फ्लप' दिँदै !
काठमाडौं, ११ असार भारतीय अभिनेता शाहरुख खान भारतीय फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेको २७ वर्ष पूरा भएको छ । कुनै समय भारतीय फिल्म उद्योगको बादशाहको रुपमा रहेका शाहरुखका फिल्म पछिल्लो समय भने केही फिक्का लाग्न थालेका छन् । यहाँ शाहरुख खानका केही फ्लप फिल्महरु उल्लेख गरिएको छ – १. जीरो शाहरुखानको पछिल्लो फिल्म जीरो हो । आनन्द एल रायको निर्देशनमा बनेको जीरोमा शाहरुखसँग अनुष्का..
सय करोड कमाउने साहिदको पहिलो सोलो फिल्म ‘कविर सिंह’
काठमाडौँ, ११ असार साहिदले चलचित्र ‘कविर सिंह’ बाट फेरि एक पटक आफ्नो स्टारडम पुष्टी गरेका छन् । यो चलचित्रले भारतीय बक्स अफिसमा रेकर्डतोड कमाई गरेको छ । चलचित्रले रिलिजको पाँचौ दिनमा सय करोड कमाई गरेको छ । ‘कबिर सिंह’ नायक साहिद कपुरको सय करोड कमाउने पहिलो सोलो चलचित्र बनेको छ । यसअघि उनी अभिनित केही चलचित्रले सय करोड कमाएपनि त्यसमा उनी मात्र..
काठमाडौँ, ९ असार । नारायणहिटी दरबार पुगेका अवलोकनकर्तामा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, “राजपरिवारका सदस्य सिनेमाप्रति चासो राख्थे कि राख्दैनथे ? सिनेमा कहाँ हेर्थे होलान् ?” तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य एवं शाही नातेदार सिनेमाका पारखी थिए । नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको सिनेमा हलमा प्रायः शुक्रबार सिनेमा हेर्ने गरिन्थ्यो । दशैँमा टीका थाप्ने कक्षसँगै जोडिएको सिनेमा हल दरबार हत्याकाण्डपछि बन्द छ । दरबारभित्रका विभिन्न कक्ष..
मुम्बई, ८ असार सलमान खान र आलिया भट्ट पहिलोपटक फिल्मी पर्दामा देखिन लागेका छन् । यी दुइले संजय लीला भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘इन्साल्लाह’मा काम गर्न लागेका हुन् । लामो समयपछि सँगै काम गर्न लागेका सलमान खानले पहिलोपटक ‘हम दिल दे चुके सनम’ मा काम गरेका थिए । उक्त फिल्ममा ऐश्वर्या राय र अजय देवगन पनि सँगै देखिएका थिए । सलमान लापरवाही पुरुषको भूमिकामा..
काठमाडौँ, ६ असार रणवीरलाई डब्लुडब्लुईका म्यानेजर पल हेमैनले चोरीको आरोप लगाएका हुन्।उनले रणवीरमाथि आफ्नो भनाइ चोरेको आरोप लगाएका हुन्। कपिलदेवको वायोपिक सिनेमा '८३'को तयारी गरिरहेका रणवीर हाल इङ्ल्याण्डमा छन्। उनले त्यहाँ भारतीय अलराउण्डर हार्दिक पाँड्यासँगको फोटो पोस्ट गर्दै हालेका थिए। पलले त्यस पोस्टमा लेखिएको शब्द आफ्नो भएको र रणवीरले चोरी गरेको आरोप लगाएका हुन्। रणविरको सो ट्वीटमा 'इट, स्लिप, कन्क्वयेर, रिपिट' शब्द उल्लेख..
एजेन्सी, ४ असार सलमान स्टारर फिल्म ‘भारत’ दुई सय करोड क्लबमा इन्ट्री गरेको छ। ‘भारत’ ले पहिलो दिनमा नै ४२ करोडको सानदार ओपनिङ गरेको थियो। फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै १४ दिनमा २ सय १ करोड ८६ लाख भारतीय रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ। फिल्ममा सलमान खान र कट्रिना कैफ मुख्य भूमिकामा छन्। भारतलाई अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन्। भारतले चार..
Results 550: You are at page4of 19